अष्ट्रेलिया विशेषः टीआरका लागि निवेदन दिदाँ कतै यस्तो गल्ती त गर्नुभएन ?
मैले २०१५ को नोभेम्बर महिनामा टीआरको निम्ति निवेदन दिएको थिएँ । हिजो एक्कासी घरमा भिसा अस्वीकृत भएको पत्र आयो । उनीहरूले मसँग मागेको पुलिस रिपोर्ट समयमै नबुझाएकोले मेरो भिसा अस्वीकृत गरिएको भनेर पत्रमा लेखिएको रहेछ । मैले इमेल चेक गर्दा उनीहरूले पठाएको इमेल जंक फोल्डरमा बसेको रहेछ, जुन मैले हेरेकै थिइनँ । अब मैले के गर्नुपर्छ?
यो त तपाईको हेलचेक्रयाँइ भयो । तर अलिकति सन्तोषको कुरो के हो भने तपाईंले आफ्नो ठेगाना भने इमिग्रेशनमा अद्यावधिक गर्नुभएको रहेछ । नभए तपाईंले यो पत्र पनि नपाउन सक्नुहुन्थ्यो, जसको अर्थ तपाईंले रिभ्यु राइट पनि गुमाउनुहुन्थ्यो । इमिग्रेशनले पठाएको पत्र जंक वा स्पाम फोल्डरमा गएर बसेको कारणले यस्तो समस्यामा पर्ने तपाईं पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्न । अरू थुप्रै आवेदकहरू पनि यो समस्यामा परेको पाइन्छ । अब तपाईंले तुरुन्त एडमिनिस्ट्रटीभ अपील्स ट्राइब्युनलमा आवेदन दिनुहोस् ।
भिसाको लागि आवेदन दिएको व्यक्ति सधैं चनाखो हुनुपर्छ । इमेल नियमित चेक गर्ने (जंक र स्पामसमेत), ठेगाना परिवर्तन भएमा तुरुन्त इमिग्रेशनमा अद्यावधिक गर्न लगाउने, कुन समयसम्म अप्लाई गरेका फाइल खुलेका छन् भन्ने कुराको बारेमा जानकारी समय—समयमा लिने आदि गर्नुपर्छ । सानो हेलचेक्रयाँइले पछि ठूलो असर पर्नसक्छ।
यस स्तम्भमा दिइएका जानकारी पूर्ण, अद्यावधिक र सबैका लागि उपयुक्त नहुनसक्छन्। कुनै निष्कर्षमा पुग्नु वा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुभन्दा पहिले अध्यागमन विभागको वेबसाइट, माइग्रेशनसम्बन्धी परामर्श दिने वकील वा रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेन्टबाट आवश्यक जानकारी लिनु उचित हुन्छ। लेखक रजिष्टर्ड माइग्रेशन एजेन्ट (MARN 1172267) हुन्। तपाईंका पनि कुनै जिज्ञासा छन् भने info@nepalipatra.com.au मा पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईंको परिचय गोप्य राखिनेछ।